Garlic pan-pizza - Recipe Thermomix | ThermoRecipes
Sakafo Pizza Garlic
Appetizers165 minitraOlona 8170 kaloria
Raha tianao ny manamboatra mofo amin'ny Thermomix anao, ity misy fomba fahandro tianao. Izy io dia mofo miendrika pizza, fluffy be ary hiaraka amina fromazy mifangaro.
Fantaro ny fomba fanaovana koba haingana sy tsotra amin'ny dingana vitsivitsy, izay tsy maintsy avelanao hijoro ary hanendasa ianao mba hamoronana ity mofo matsiro ity.
Hosaronantsika tongolo lay, dibera ary akora hafa hafa hiaraka aminy ity pizza ity amin'ny fomba hafa. Azonao atao ny manandrana azy irery na miaraka amin'ny lovia rehetra.
1 Mofo tongolo gasy
Mofo tongolo gasy
Atorinay anao ny fomba hanamboarana mofo pizza tena be. Tianao izany noho ny tsirony fromazy sy tongolo lay, ary azonao ampiasaina ho toy ny sisin'ny lovia maro.
Fotoana fiomanana: 2h 30M
Fotoana manontolo: 2h 45M
200 g ny lafarinina varimbazaha
Atody nokapohina 1 (esorinay ny sotro iray)
Masirasira mpanao mofo 4 g (sotrokely 1)
Sira antsasaky ny eran'ny sotrokely
Ronono manontolo 80 ml
Dibera 30 g, malemy
Koba kely hafafiny
Dibera 1 sotro fihinana, nalemy
Siramamy antsasaky ny sotrokely
Mayonnaise 1 sotro
Tongolo 1 sotro, voatetika tsara
1 sotro fihinana persily vaovao voadio
Atody 1 nokapohina XNUMX sotro fihinanana no natokanay
Mozzarella gratasy 2 sotro fihinanana
Ao amin'ny veranay Thermomix dia ampio ny atody nokapohina, mihena iray sotro iray izay hotehirizinay. Ampio ny siramamy 15 g, ny sotro ny masirasin'ny mpanao mofo, ny antsasaky ny eran'ny sotrokely ary ny ronono manontolo 80 ml. Mandrakotra azy io sy mandahatra ny programa izahay 10 segondra amin'ny hafainganam-pandeha 4.
Ampio ny lafarinina varimbazaha 200 g ary andramo indray 20 segondra amin'ny hafainganam-pandeha 4. Arotsaho indray ny dibera sy programa malefaka 30 g 5 minitra amin'ny hafainganam-pandehan'ny fametahana.
Aorian'ny fametahana, avelao hipetraka ao anaty vera mandritra ny 45 minitra ny koba mba hiakatra.
Manomana latabatra misy lafarinina kely izahay, mamoaka ny koba ary hametafeta azy. Raha miraikitra amin'ny tanantsika io dia hanampy antsika amin'izany lafarina izany isika afaka mamorona baolina. Hiezaka ny hanao ny endriky ny bun ary apetraka amin'ny lovia azo amboarina amin'ny taratasy fanaova. Napetrakay tao anaty lafaoro izy tamin'ny 50 ° ary nisokatra kely ny varavarana. Avelantsika hiakatra mandritra ny adiny 1 eo izany.
Ao anaty feta iray no manorotoro ny tongolo lay telo tongolo lay. Ao anaty vilia iray dia ampidirintsika ny sotro dibera malefaka, ny tongolo lay, ny siramamy antsasaky ny sotrokely, ny sotro ny mayonnaise, ny sotro ny tongolo voatetika voatetika, ny sotro ny persily voatetika sy ny sotro atody nokapohina izay natokinay. Afangaroinay tsara mandra-pahatonga azy ho lasa paty.
Manala ny koba amin'ny lafaoro izahay, manidy ny lafaoro ary mametraka azy amin'ny hafanana hatramin'ny 180 °. Raisinay ny koba ary apetaka amin'ny tanantsika mba hamoronana koba boribory, nefa amin'ny habetsahana. Hanao sombin-tsambo kely amin'ny antsy isika ary hanaparitaka ny fangaro amin'ny tongolo lay eo amboniny. Izahay dia nanaparitaka azy tsara tamin'ny alàlan'ny sotro.
Miaraka amin'ny sotro isika dia mifantoka amin'ny fanamarihana ireo lava-bato izay nofaranay tamin'ny antsy tsara lavitra. Eo anelanelan'ny lava-bato dia apetratsika ny mozzarella grated ary hanao tsindry kely isika mba hidirany tsara. Napetrakay tao anaty lafaoro nandritra ny 15 minitra ny vilany-pizza.
Ny volony dia tsy maintsy ho volamena. Izy io dia sakafo matsiro be izay ahafahantsika mankafy mafana na miaraka amin'ny lovia rehetra.
Mitadiava fomba fahandro hafa momba ny: Appetizers
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Thermorecetas » Resipeo thermomix » Appetizers » Sakafo Pizza Garlic
Mofomamy hazelnut tsy misy gluten
Tanan-tsandrin'i Gypte crème sy paoma compote